Kooxda AC Milan oo sugeysa go’aanka Real Madrid si ay ula saxiixato Luka Modrić – Gool FM
(Italy) 17 Luulyo 2019. Wariyaha caanka ah ee Gianluca Di Marzio ayaa shaaca ka qaaday in kooxda AC Milan ay ku fikireyso lasoo saxiixashada xiddiga reer Croatia iyo Real Madrid Luka Modrić inta uu furan yahay suuqan xagaaga.
Magaca 33 jirkan reer Croatia ayaa lala xiriirinayaa inuu ka tagayo garoonka Santiago Bernabéu xagaagan, iyadoo ay jireen warar sheegayay inuu ku dhow yahay ku biirista kooxda Inter Milan sanadkii hore.
Bartamaha xili ciyaareedkii hore markale ayaa waxaa soo laabatay wararka ku aadan in Luka Modrić uu ku dhow yahay inuu ku biiro kooxda Inter Milan.
Haatan, sida laga soo xigtay suxufiga caanka ah ee Gianluca Di Marzio AC Milan ayaa si aad ah u daneeneysa fikrada ay ku dooneyso inay kula saxiixato Luka Modrić.
Gianluca Di Marzio ayaa wuxuu tilmaamay in Milan ay u dhaqaaqi doonto soo xero galinta xiddiga reer Croatia ee Luka Modrić, hadii ay go’aansato kooxda Real Madrid inay iska iibiso inta lagu gudi jiro suuqan xagaaga.
Di Marzio ayaa wuxuu dhinaca kale shaaca ka qaaday in maamulka kooxda Milan ay kulan la qaateen wakiilka Luka Modrić maalinkii Talaadada ee lasoo dhaafay si ay u wada hadlaan, Balse hadalka ayaa tan iyo wixii xiligaas ka dambeeyay wuxuu isku badalay fikrada ah suurtogalnimada ay ku heli karaan adeega Luka Modrić.
Waxaa xusid mudan in heshiiska uu Luka Modrić ku joogo kooxda Real Madrid uu ku egyahay xagaaga 2020.